Ingxangxasi yeHole yeVenkile yegumbi lokuhlambela yangasese
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Amanzi ahamba ngeeBhafu zokuhlambela / Ingxangxasi engumbhobho weSitya sokuhlambela esingasese
Le yoyilo yangoku itephu yebasin lolona loyilo lutsha kunye nemveliso entsha. Idibana neemfuno zaseYurophu. Ndiyaneliseka kukuba le faucet esemgangathweni yokuhlambela ihombise indawo yakho yangasese, inika ixabiso elifanelekileyo lemali kwaye ivumela ubomi obuzolileyo nobonwabisayo. Impompo yamanzi ayinachaphaza lamanzi kunye nengxolo: amanzi kunye nomoya wakhelwe ngaphakathi ukuze kugcinwe kude nokuchithachitheka okukhulu. Sebenzisa iivevithi ezilungileyo zeceramic, kunye nobushushu obugqithisileyo, ubulukhuni obugqithisileyo, ukumelana ne-asidi kunye nealkali kunye neepropathi zokulwa ukuguga. Ukutshintsha okuthobekileyo akubangeli ukugqabhuka kwetyhubhu kwaye kukuncede uphephe ukuchitha amanzi angama-30%! Kwimeko apho uthengela le faucet yokuhambisa amanzi ngaphakathi kumbhobho wewowow, unokulunga xa uthenga.
Ukuhlanjwa kwebhafu kwenziwa ngomgangatho ophezulu Ubhedu, i-100% yokukhokela kunye ne-nickel yasimahla, yomelele ukukhusela impilo yakho
Umxube wokuxhuma omnye wenza kube lula ukuseta umsinga wamanzi okanye iqondo lobushushu, kulula kwaye kunengqondo
Impompo yespompo se-Waterfall nge-ABS bubbler, amanzi agudileyo, akukho manzi achaphazelayo, ukongeza kangange-30% yokonga amanzi, Snug kunye nokuzola
Le faucet iba kwikhatyhiriji yodongwe, ngamawaka angama-500,000 okujonga, oku komelele kwaye akukho kuvuza kwamanzi
Udibanisa uninzi lweesinki okanye izitya. Eqhelekileyo 3/8 intshi uxhulumaniso oluqhelekileyo, ukuseta okulula
Ukwahluka kwezibambo: into enye ijongana nayo
Sebenzisa: umxube wamanzi abandayo kunye ashushu
Ixabiso lokujikeleza: 2 GPM (7.5 l / min) Uninzi
Ubunzima: 3-5 bar
Isithuba sangqa: Φ32mm
Ngesiqhelo 3/8 “uxhulumaniso oluqhelekileyo
Ubunzima: malunga ne-1.3 kg
1 x itephu yangasese
1 x Incwadi yesikhokelo
1 x Izixhobo zokubeka
I-Basin Wall Basin Faucet emhlophe
Mini Monobloc Basin Umxhubi Cofa iChannel